Valin'ny fanontaniana | December 2019
Tena Valin'ny fanontaniana
Afaka miasa amin'ny Wi-Fi ny fakantsary IP
Good day! Omaly dia nividy kamiao IP IPera IP Camera CP1 IP Vimtag Snowman Wireless PTZ. Androany aho dia nanomboka nanamboatra izany, nanao izany aho, toa araka ny torolalana, izay ilazany fa mila mampifandray ny fakantsary aloha ianao na USB. Nampifandraisiko tamin'ny USB izany, avy eo ho an'ny Wi-Fi. Tsara daholo ny zava-drehetra, miasa ny fakantsary, nandeha an-tongotra kilaometatra, notsongaina, hita tsara daholo ny zava-drehetra.
Tsidiho ny doka sarotra ho an'ny hetsika mety
Hello Nandeha tany amin'ny tranonkalanao aho mba hanamarina ilay fiara mafy, satria nanomboka niasa ratsy ny PC, saingy tsy fantatro ny tokony hatao. Namaky fampahalalana maro samihafa aho, nijery aho, ary nahazo fampahalalana tahaka izany momba ny disk drive (500 GB HDD). Fantatro fa raha misy volo mena sy manga - ratsy izany. Manana mena 0 mena sy manga 1 aho, manga 1 fotsiny, nefa tsy fantatro akory hoe firy ny "ara-dalàna" ho an'ny fiara mafy, fa firy no "tsy ara-dalàna" (Harddisk dia 5-6 taona) Ary tiako raha hanampy ahy sy dia nanolotra soso-kevitra hoe firy ny "sehatra" mena sy marefo marefo, ary firy no efa "tsy ara-dalàna" ary fotoana hieritreretana ny fanovana ny fiara mafy.
Hadisoana ny fanakanana ny fampiharana ny fampiharana ataon'ny Windows Defender
Amin'ny Windows 10, ny olana amin'ny fametrahana applications. Fiarovana amin'ny fako tsy manampy. Rehefa manomboka ilay rindrambaiko ianao, dia misy famantarana hoe "ny fikambanananao dia nanakana ity fampiharana ity amin'ny fampiasana ny paikady fitantanana ny application amin'ny Windows defender". Namaky ireo toro-hevitra aho, fa tokony hofoanana ny bootera Security ao amin'ny BIOS. saingy tsy misy ity parameter ity, izany hoe, ao amin'ny tabilao boot dia misy lisitry ny fitaovana izay manome loha laharana ny tenimiafina ao amin'ny tabilan'ny fiarovana, mametraka ny parameter F12.
Resaka miaraka amin'ny Samsung 860 EVO SSD
Hello Manana olana aho na dia tsy afaka nanampy aza ilay mpanamboatra, ny marina dia nividy SSD EVO 860 256 gb, ny zava-drehetra dia miasa tsara, toa toa maivana haingana, fa mbola eo ihany ny olana. Ny programa hiasa miaraka amin'ny Samsung SSD Magician 5 dia efa nandefa ny rindrambaiko farany farany, tsy maniry mihitsy ny hiasa amin'ny PC.
Inona no baikon'ny menamena tena ilaina "EXECUTE" ao Windows 7-10? Inona avy ny fandaharana azo atao amin'ny "EXECUTE"?
Fotoana tsara ho an'ny rehetra. Rehefa mamaha olana samihafa amin'ny Windows, dia ilaina matetika ny manatanteraka baiko isan-karazany amin'ny alalan'ny "Run" menu (ampiasaina amin'ity menio ity, azonao atao ihany koa ny manatontosa fandaharana tsy takatry ny fijerena). Ny programa sasany anefa dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny Windows Control Panel, saingy amin'ny fitsipika dia mila fotoana maharitra izany.
Inona no fandaharana tsara indrindra amin'ny fiasàna ny sary ISO?
Good day! Ny iray amin'ireo sary nalaina malaza indrindra hita ao amin'ny harato dia tsy isalasalana fa ny format ISO. Ny zavatra tena mahaliana indrindra dia toa misy programa marobe izay manohana ity format ity, saingy ahoana no hamonoana ity sary ity amin'ny rakitra iray na hamoronana azy - indray mandeha ... Ao amin'ity lahatsoratra ity dia tiako ny handinika ny fandaharana tsara indrindra hiarahana miasa amin'ny Sary ISO (mazava ho azy).
Ahoana ny fandoroana disc iray avy amin'ny ISO, MDF / MDS, NRG?
Good afternoon Angamba, ny tsirairay amintsika indraindray dia mamoaka sary ISO sy ny hafa miaraka amin'ny lalao, programa, antontan-taratasy, sns. Indraindray, isika dia manao azy ireo, ary indraindray, mila mandefa ao amin'ny media tena izy - CD na DVD. Matetika dia mila mandoro rakitra avy amin'ny sary ianao rehefa mandeha milalao izany ary mameno ny fampahalalana ao amin'ny haino aman-jery CD / DVD any ivelany (raha toa ka simban'ny virus na ny ordinatera sy OS ianao), na mila rakitra hametrahana Windows ianao.
Ahoana no hianarana ny fomba hikirakira haingana amin'ny klavier - fandaharam-pampianarana sy aterineto
Tonga soa! Izao no fotoana, fa tsy misy solosaina intsony, tsy eto intsony fa tsy eto. Ary midika izany fa mihamitombo ny lanjan'ny fahaiza-manaon'ny solosaina. Izany dia azo lazaina ho toy ny fahaiza-manao ilaina, toy ny haingo haingana haingana amin'ny tanana roa, tsy hijery ny klavier. Tsy mora ny mamboly fahaiza-manao toy izany - fa tena marina.
Formula Excel amin'ny famaritana ny fahantrana
Ahoana ny fomba hanaovana rindrambaiko ao amin'ny Excel. Natao tamin'ny fotoana nandroahana ilay trano. Ny ohatra nasehon'ny miaramila dia nokaramaina tamin'ny 04/01/1997, ary najanona tamin'ny 07/31/2017 Araka ny baolina faha-916 amin'ny 12/29/1997 dia tsy maintsy omena rongony 1 tapitrisa ho an'ny 3 taona izy ary ny baolina faha-148 amin'ny 07.2008 dia tokony homena 1 isaky ny 4 taona, arakaraka ny laharana 578 avy amin'ny 14.
Famoahana sary sy sary
Good afternoon Hatramin'izao, ny tambajotra dia afaka mahita sary sy sary an'arivony an'arivony. Izy rehetra dia zaraina amin'ny endrika samihafa. Raha miara-miasa amin'izy ireo ianao, indraindray dia mila manova ny formato ianao: mba hampihenana ny habe, ohatra. Noho izany, ao amin'ny lahatsoratra androany, tsy hijery afa-tsy amin'ny famadihana sary fotsiny ihany isika, fa mitoetra ao amin'ny endrika malaza ihany koa, amin'ny fotoana sy izay mety tsara kokoa.
Atsaharo ny ordinatera amin'ny ordinatera
Good day! Touchpad dia fitaovana mampihetsi-po izay natao manokana ho an'ny fitaovana portable, toy ny solosaina finday, netbooks, sns. Ny valphefony dia mamaly rehefa manantona rantsantanana eo amin'ny elany ianao. Nampiasaina ho toy ny fanolo (alternative) amin'ny toto mahazatra. Ny solosaina finday rehetra dia misy fitaovana fanontam-pirinty, nefa, raha ny zava-misy dia tsy mora ny manala izany amin'ny ordinatera ... Fa maninona no mamafa ny tadidy?
Inona avy ireo programa maotera malalaka amin'ny ordinatera?
Amin'izao tontolo izao, ny solosaina dia mihamitombo hatrany ny fiainantsika. Maro ny faritra tsy azo eritreretina raha tsy mampiasa PC: matematika matihanina matihanina, famolavolana, modely, fifandraisana Internet, sns. Farany dia tonga tamin'ny sary! Ankehitriny, tsy ireo mpanakanto, fa ireo tia tsotra tsotra ihany no afaka manandrana manamboatra karazana "sangan'asa" amin'ny alalan'ny programa manokana.
Ahoana no hamokarana rakitra mafy amin'ny data sy Windows rehetra?
Good day. Matetika matetika amin'ny torolàlana marobe, alohan'ny fanavaozana ny mpamily na fametrahana fampiharana rehetra, dia manolo-kevitra ny hamerina famerenana hamerenana ny solosaina miasa, Windows. Tsy maintsy miaiky aho fa ireo fepetra ireo ihany no omeko ... Matetika, Windows dia manana rafitra fanarenana ao amin'ny tranokala (raha tsy nanakana azy io ianao, mazava ho azy), fa tsy hiantso azy io ho azo antoka sy azo antoka.
Ahoana ny fijerena ny karatra video amin'ny fampisehoana?
Good day. Ny fividianana karatra video (ary mety ho solosaina vaovao na solosaina finday) dia tsy voatery ho enti-manana mba hiantsoana antsoina hoe fitsaboana (jereo ny karatra video ho an'ny fiatoana mandritra ny fotoana maharitra). Ilaina ihany koa ny manondraka ny karatra video efa ela (indrindra raha raisinao amin'ny tànan'ny olona iray tsy fantatra).
Mijery ny karatra video ho an'ny fahombiazana, ny fitsirihana ny toetrandro.
Good day. Ny fahombiazan'ny karatra video dia miankina amin'ny haingam-pandeha mivantana (indrindra ireo vaovao). Ankoatra izany, ny lalao amin'ny fotoana iray dia iray amin'ireo fandaharana tsara indrindra amin'ny fanandramana ordinatera iray manontolo (ao anatin'izany fandaharam-pampianarana manokana izany matetika ny seho an-tsehatra ampiasaina izay ampiasaina amin'ny isam-bolana).
Nahoana no tsy manomboka ny Windows10
Dear Andrey Ponomarev! Ny faharetan'ny laptop-n'ny faharetako Samsung dia nizotra ny maso mena maharitra telo andro ary nametahana ny Windows10, saingy nijanona teo aloha ilay hadisoana: hanomboka, tsy maintsy nasehoko azy ny làlana, handefa an'i F2 rehefa mipaika 4 dingana mankany amin'ny havanana-Miala-5 dingana mankany amin'ny laharana P1 TSSTcorp CDDUDW SN 208BB-Ampidiro.
Ny masonao feno reraka rehefa miasa amin'ny solosaina, lazao ahy ny fomba hisorohana ny tsy fahampiana?
Hello Na dia teo aza ny fahatongavan'ny taonjato faha-21 - ny taonan'ny teknôlôjian'ny ordinatera, ary tsy misy ordinatera fa tsy etsy sy eroa, dia tsy afaka mipetraka ao ambadiky ny fotoana. Araka ny fantatro dia manoro hevitra ny mpitsabo fa tsy mihoatra ny adiny iray isan'andro ao amin'ny PC na TV. Mazava ho azy, azoko fa izy ireo dia tarihin'ny siansa, sns.
Emulator androany ho an'ny Windows (fampisehoana lalao sy android programa)
Ity lahatsoratra ity dia ilaina ho an'ireo izay manapa-kevitra ny hampihatra ny fampiharana Android ao amin'ny solosaina findainy. Ohatra, raha te-hijery ny fomba fampiharana azy ianao, alohan'ny halefa amin'ny tablette na smartphone; Tsara, na te-hilalao lalao fotsiny, dia tsy azo atao izany raha tsy misy mpanentana Android! Amin'ity lahatsoratra ity dia handinihantsika ny asan'ny emulator tsara indrindra ho an'i Windows sy ireo fanontaniana mahazatra izay matetika miseho amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa ... Lohahevitra 1.
Ahoana ny fampifandraisana ny TV Smartphone amin'ny Internet amin'ny alalan'ny Wi-Fi?
Hello Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fivoaran'ny teknôlôjia dia mitohy haingana toy izao dia toa zava-misy ankehitriny izay toa toa omaly fa angano! Milaza izany aho fa amin'izao andro izao, na dia tsy manana ordinatera aza ianao, dia afaka mijery ireo tranonkala Internet, mijery horonan-tsarimihetsika ao youtube ary manao zavatra hafa amin'ny Internet amin'ny fampiasana TV!
Ahoana no hanokafana rakitra PPTX
Ny fampiroboroboana teknolojian'ny fampahalalam-baovao dia mitaky ny famoronana endriny vaovao amin'ny fampitam-baovao, mampifanaraka ny endri-javatra mamirapiratra, tsy hay hadinoina, lahatsoratra mifototra, sarimihetsika sarotra be indrindra, feo sy lahatsary. Sambany vao voavaha ireo olana ireo tamin'ny fampiasana ny format PPT. Taorian'ny famoahana ny MS 2007, dia nosoloina PPTX kokoa io, izay mbola ampiasaina hamoronana ny fampisehoana.
https://termotools.com mg.termotools.com © Valin'ny fanontaniana 2019